Kooxda Real Madrid oo qorsheynaysa inay isticmaasho Gareth Bale si ay Man United uga hesho Paul Pogba – Gool FM
Kooxda Real Madrid oo qorsheynaysa inay isticmaasho Gareth Bale si ay Man United uga hesho Paul Pogba
Haaruun March 22, 2019
(Madrid) 22 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay qorsheynayso inay Gareth Bale qeyb uga dhigto heshiis kasta oo ay kula soo saxiixanayso laacibka khadka dhexe ee Manchester United, Paul Pogba.
Gareth Bale ayaa ku guuldareystay inuu xilli ciyaareed kale ku soo bilaawdo Bernabeu, waxaana soo laabashada tababare Zinedine Zidane aysan gacan ka geysan doonin dadaalka uu xiddigan reer Wales ugu jiro sidii uu boos joogta ah uga heli lahaa safka hore ee Los Blancos.
Si kastaba, Zidane oo la midoobay Real ayaa laga yaabaa inay ka caawiyo inuu yimaado Pogba, Jariiradda AS ayaana warinaysa in kooxda reer Spain ayaa diyaar u ah in si wadajir ah loo sameeyo heshiis is-weydaarsi.
Pogba ayaa labo sanadood ay kaga harsan tahay qandaraaskiisa garoonka Old Trafford, 26-sano jirkaan ayaana horraantii isbuucaan soo jeediyay inuu u furan yahay inuu mustaqbalka u dhaqaaqo kooxda Real Madrid.
Bale ayaa dhankiisa sheegay inuu ku faraxsan yahay nolosha Spain, laakiin waxa ay u muuqataa in weeraryahanka uu diyaar u yahay inuu ku laabto horyaalka Premier League haddii Man United ay ogolaato inay wadahadal la galaan Real Madrid.
Xiddiga xulka qaranka Wales ee Bale ayaa kooxda Real Madrid kaga soo biiray naadiga ka dheesha horyaalka Premier League ee Tottenham.
Varane oo ku wargaliyay saaxiibadiis go’aankiisa kaga aadan mustaqbalkiisa kooxda Real Madrid
Manchester City oo u muuqata inay kooxaha Manchester United iyo Barcelona ku garaacday saxiixa Ronaldo Camara